Bit By Bit - agba nwere - 4.6.2 Mee ụkpụrụ omume n'ime imewe gị: dochie, dozie, na belata
Mee ka gị na nnwale obi mmadu site n'iji nwere na-abụghị ibuo ọmụmụ, anụcha na ọgwụgwọ, na mbenata ọnụ ọgụgụ nke ndị keere òkè.
Akụkụ nke abụọ nke ndụmọdụ m ga-achọ ịnye banyere ịmepụta nyocha nke dijitalụ na-eche banyere ụkpụrụ omume. Ka Restivo na nchọpụta van de Rijt na barnstars na Wikipedia na-egosi, ọnụahịa belata pụtara na ụkpụrụ omume ga-aghọ akụkụ dị mkpa nke nyocha nyocha. Na mgbakwunye na usoro ihe omume nke na-eduzi nnyocha ụmụ mmadụ na-akọwa na m ga-akọwa na isi nke 6, ndị nchọpụta na-emepụta nchọpụta dijitalụ pụkwara ịdakwasi echiche ndị dị mma site na isi iyi: usoro ụkpụrụ omume malitere iji duzie nyocha ndị metụtara ụmụ anụmanụ. Karịsịa, na ha akara akwụkwọ bụ Principles of Humane Experimental Tech , Russell and Burch (1959) kwuru ụkpụrụ atọ ga-eduzi nyocha anụmanụ: dochie, dozie, na belata. Ọ ga-amasị m ịsị na a pụrụ iji atọ R ndị a mee ihe-na ụdị dịtụ gbanwere-iji duzie atụmatụ nke nyocha mmadụ. Ọ kachasị,
Gbanwee: Dochie nyocha na ụzọ ndị na-abaghị uru ma ọ bụrụ na o kwere omume.
Nyochaa: Chịgharịa ọgwụgwọ ahụ ka ọ bụrụ ihe na-adịghị njọ dịka o kwere mee.
Mbelata: Belata ọnụ ọgụgụ nke ndị sonyere na nnwale gị dị ka o kwere mee.
Iji mee ihe atọ R a ma gosipụta otú ha nwere ike isi na-eduga n'inwekwu ule na nke ọzọ, m ga-akọwa nhụpụta ubi nke ntanetị nke na-arụ ụka arụmụka. Mgbe ahụ, m ga-akọwa otú atọ R na-atụ aro maka mgbanwe na mgbanwe ndị dị na nhazi nke nnwale ahụ.
Otu n'ime ihe ndị a na-eme n'ọmụmụ ihe ntanetị bụ Adam Kramer, Jamie Guillroy, na Jeffrey Hancock (2014) wee kpọọ ya "Contagion Emotional". Nnwale ahụ weere ọnọdụ na Facebook ma kpata ihe na sayensị ajụjụ ndị bara uru. N'oge ahụ, ụzọ kachasị mma ndị ọrụ na Facebook bụ News Feed, ihe nchịkọta algorithmically nke setịpụrụ ọnọdụ Facebook site n'aka ndị enyi Facebook. Ụfọdụ ndị na-akatọ Facebook kwuru na ọ bụ n'ihi na News Feed nwere ọtụtụ ihe ndị dị mma-ndị enyi na-egosi na ha ga-enwe ọhụụ ọhụrụ-ọ nwere ike ime ka ndị ọrụ nwee mwute n'ihi na ndụ ha yiri ihe na - adịghị mma ma e jiri ha tụnyere ya. N'aka nke ọzọ, ma eleghị anya, mmetụta ahụ bụ ihe dị iche: ma eleghị anya, ịhụ enyi gị nwere ezigbo oge ga-eme ka ị nwee obi ụtọ. Iji mee ka a tụlee nkwupụta ndị a na-asọmpi-na ịkwalite nghọta anyị banyere mmetụta mmetụta nke ndị enyi ya na-emetụta mmetụta uche onye mmadụ-Kramer na ndị ọrụ ibe ya mere ka a nwalee ha. Ha na-etinye ihe dị ka mmadụ 700,000 n'ime ìgwè anọ maka otu izu: otu "nhụsianya-belata" otu, nke onye na-eji okwu ọjọọ (dịka, "mwute") egbochighị ya ịpụta na News Feed; "otu ndị" na-ebelata "maka ndị na-eji okwu ndị dị mma (dịka" obi ụtọ ") mechie; na otu ìgwè dị iche iche. N'etiti ndị na-achịkwa maka "nhụjuanya" -ebelata ", a na-egbochi posts na-enweghị usoro n'otu ọnụego ahụ dịka" otu nhụjuanya na-ebelata "ma na-enweghị ihe gbasara mmetụta uche. Ejikọtara ìgwè ndị na-achịkwa maka ìgwè "positivity-decreased" na ụdị ejiji. Ebumnuche nke nnwale a na-egosi na otu njikwa na-achịkwa adịghị mgbe niile n'enweghị mgbanwe ọ bụla. Kama nke ahụ, mgbe ụfọdụ, otu nchịkwa na-enweta ọgwụgwọ iji mee ka njirisi kwesịrị ekwesị dị mkpa maka ajụjụ nchọpụta. N'ọnọdụ niile, ọ bụ ndị ọrụ site na n'akụkụ ndị ọzọ nke Facebook website ka a na-egbochi posts ndị a na-egbochi na News Feed.
Kramer na ndị ọrụ ibe ha chọpụtara na ndị na-ekere òkè n'ọnọdụ ọnọdụ positivity, ọnụ ọgụgụ nke okwu dị mma na nwelite mmelite ha belata na pasent nke okwu ọjọọ. N'aka nke ọzọ, maka ndị na-ekere òkè na ọnọdụ nhụjuanya ahụ-ọnụ ọgụgụ dị ala, pasent nke okwu dị mma mụbara na nke okwu ọjọọ na-ebelata (nọmba 4.24). Otú ọ dị, mmetụta ndị a dị nnọọ ntakịrị: ọdịiche dị n'etiti okwu ọma na okwu ọjọọ n'etiti ọgwụgwọ na njikwa dị ihe dị ka 1 na 1,000 okwu.
Onu ogugu 4.24: Ihe akaebe banyere mmetuta obi (Kramer, Guillory, and Hancock 2014) . Ndị na-eso na-eme ka ndị mmadụ na-enwekarị okwu na-abaghị uru na okwu ndị dị mma, ndị na-ekere òkè na ọnọdụ nke positivity na-eji okwu ndị na-abaghị uru na okwu ole na ole dị ole na ole. Bars na-anọchite anya njehie ndị e mere atụmatụ. E si n'aka Kramer, Guillory, and Hancock (2014) , nke 1.
Tupu ịkọwa okwu gbasara okwu ọma nke nnwale a, m ga-achọ ịkọwa okwu sayensị atọ na iji ụfọdụ echiche sitere na mbụ na isi. Nke mbụ, ọ bụghị ihe doro anya otú nkọwa nke nnwale ahụ si jikọọ na nkwupụta okwu ahụ; na okwu ndị ọzọ, enwere ajụjụ banyere ịrụ ọrụ nke ọma. O doro anya na okwu dị mma ma na-abaghị uru na-egosi ezi mmetụta nke mmetụta uche nke ndị na-eso ya n'ihi na (1) ọ bụghị ihe doro anya na okwu ndị mmadụ biputere bụ ezigbo njirimara nke mmetụta ha na (2) ọ bụghị doo anya na usoro nlezianya nke mmetụta uche nke ndị na-eme nnyocha jiri nwee ike ịdabere na mmetụta uche (Beasley and Mason 2015; Panger 2016) . N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, enwere ike ịnwe mgbaàmà na-enweghị isi. Nke abụọ, nhazi na nyocha nke nnwale ahụ agwaghị anyị ihe gbasara onye kacha emetụta ya (ya bụ, ọ dịghị nyochaa usoro dị iche iche nke ọgwụgwọ) na ihe usoro ahụ nwere ike ịbụ. N'okwu a, ndị na-eme nnyocha nwere ọtụtụ ihe ọmụma gbasara ndị so na ya, ma e mere ka ha dị ka wijetị na nyocha. Nke atọ, mmetụta dị ukwuu na nnwale a dị obere; ọdịiche dị n'etiti ọgwụgwọ na njikwa ọnọdụ dị ihe dị ka 1 na 1,000 okwu. N'akwụkwọ ha, Kramer na ndị ọrụ ibe gị na-ekwu na mmetụta dị nha a dị mkpa n'ihi na ọtụtụ narị nde mmadụ na-enweta Nkwukwo nri ha kwa ụbọchị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ha na-arụ ụka na ọ bụrụgodị na mmetụta dị obere maka onye ọ bụla, ha dị oke nchịkọta. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị ga-anakwere arụmụka a, ọ ka edoghị anya ma ọ bụrụ na mmetụta nke nha a dị mkpa maka ihe gbasara sayensi n'ozuzu banyere ajụjụ mgbasa ozi (Prentice and Miller 1992) .
Na mgbakwunye na ajụjụ ndị a sayensị, ụbọchị ole na ole ka e bipụtara akwụkwọ a na Proceedings of the National Academy of Sciences , e nwere oké mkpu site n'aka ndị na-eme nchọpụta na ndị nta akụkọ (m ga-akọwa arụmụka na arụmụka a n'ụzọ zuru ezu na isi 6 ). Ihe iseokwu a kpatara na arụmụka a mere ka akwụkwọ akụkọ ahụ bipụtara "nkwupụta nchegbu" na-adịghị ahụkebe banyere ụkpụrụ omume na usoro nlezianya maka usoro nnyocha (Verma 2014) .
N'iburu nzụlite ahụ banyere Contagion mmetụta, m ga-achọ igosi na atọ R nwere ike ịkọ aro, mmezi ọganihu maka ezigbo nnyocha (ihe ọ bụla i nwere ike iche banyere ụkpụrụ omume nke nnwale a). Nke mbụ R bụ dochie anya : ndị na-eme nnyocha kwesịrị ịchọ iji dochie anya ịnwale na usoro na-adighi ike ma dị ize ndụ, ma ọ bụrụ na o kwere omume. N'ihi na ihe atụ, kama na-agba ọsọ a enweghị usoro na-achịkwa nnwale, na-eme nnyocha ike erigbuwo a eke nnwale. Dị ka akọwara na isi nke 2, ihe ndị e kere eke bụ ọnọdụ ebe ihe na-eme na ụwa nke na-egosi ebe a na-agwọ ọgwụgwọ (dịka, ịgba chaa chaa ikpebi onye ga-edebanye aha na ndị agha). Njirimara bara uru nke ihe omumu nke oma bu na onye nyocha achoghi agha inye ndi ozo: gburugburu ebe obibi ka nke a diri gi. Dịka ọmụmaatụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkwenye Emotional Contagion, Lorenzo Coviello et al. (2014) -emegharị ihe a pụrụ ịkpọ nyocha nke nnwale nke mmetụta uche. Coviello na ndị ọrụ ibe ha chọpụtara na ndị mmadụ na-etinyekwu okwu ọjọọ na okwu ole na ole dị na ụbọchị ọ na-ezo. Ya mere, site n'iji mgbanwe dịgasị iche na ihu igwe, ha enwere ike ịmụ nmetụta nke mgbanwe na News Feed na-enweghị mkpa ịbanye ma ọlị. Ọ dị ka à ga-asị na ihu igwe na-agba ọsọ ha. Nkọwa nke usoro ha dị ntakịrị mgbagwoju anya, ma ihe kachasị mkpa maka nzube anyị ebe a bụ na site na iji nchọpụta anụ ahụ, Coviello na ndị ọrụ ibe ha nwere ike ịmụta banyere mgbasa nke mmetụta na-enweghị mkpa iji gbasaa nnwale onwe ha.
Nke abụọ nke atọ Rs na- edozi : ndị na-eme nchọpụta kwesịrị ịchọ ịmịchaa ọgwụgwọ ha iji mee ka ha bụrụ ihe na-adịghị njọ dịka o kwere mee. Dịka ọmụmaatụ, kama igbochi ọdịnaya ndị dị mma ma ọ bụ na-adịghị mma, ndị nchọpụta ahụ nwere ike ime ka ihe dị mma ma ọ bụ nke na-adịghị mma kpalite. Ihe a na-ewuli elu ga-agbanwewo mmetụta obi ụtọ nke ndị so na 'News Feeds', ma ọ ga-ekwu otu n'ime nchegbu ndị nkatọ kwuru: na nnwale ahụ nwere ike ime ka ndị na-agụ ya ghara ịchọta ozi dị mkpa na Ntanetị Akụkọ ha. Na nkwekọrịta nke Kramer na ndị ọrụ ibe ya, ozi dị mkpa dị ka ọ ga-egbochi dị ka onye na-adịghị. Otú ọ dị, site na mmebe dị elu, ozi ndị a ga-ewepụ ga-abụ ndị na-adịchaghị mkpa.
N'ikpeazụ, nke atọ R na- ebelata : ndị na-eme nchọpụta kwesịrị ịchọ iji belata ọnụ ọgụgụ nke ndị so na nyocha ha na nke kachasị dị mkpa iji nweta ihe ha sayensị. Na nyocha nke analog, nke a mere nke oma n'ihi oke ugwo nke ndi otu. Ma na nyocha dijitalụ, karịsịa ndị nwere ọnụ agbanwe agbanwe, ndị na-eme nchọpụta adịghị echefu ụgwọ dị nfe na nha nke nnwale ha, nke a nwekwara ike iduga nyocha dị oke mkpa.
Dịka ọmụmaatụ, Kramer na ndị ọrụ ibe gị nwere ike iji nyocha ihe gbasara ndị na-eso ha-dịka ịmepụta omume tupu ịgwọ ya-iji mee ka nyocha ha dịkwuo mma. Karịsịa, kama iji atụnyere ọnụ ọgụgụ nke okwu dị mma na usoro nlekọta na njikwa, Kramer na ndị ọrụ ibe ya nwere ike iji ya tụnyere mgbanwe nke okwu dị mma n'etiti ọnọdụ; usoro nke a na-akpọkarị ihe a na-ejikọta ọnụ (nọmba 4.5) na mgbe ụfọdụ a na-akpọ atụmatụ ọdịiche dị iche. Nke ahụ bụ, maka onye ọ bụla so na ya, ndị na-eme nchọpụta nwere ike ịmepụta mgbanwe (omume nhazi omume \_(-\_) tupu a gwọọ ya) wee tụnyere ọnụ ọgụgụ mgbanwe nke ndị so na usoro ọgwụgwọ na njikwa. Ntughari di iche na nke di iche iche bu ihe omuma nke oma, nke putara na ndi nchoputa nwere ike inwe nkwenye nke onu ogugu di iche iche site na iji udi omuma.
Enweghi usoro data, ọ na-esiri ike ịmara kpọmkwem otú ọ ga-esi dịkwuo mma ma ọ bụrụ na ị ga-enwe ọdịiche dị iche na nkewa. Mana anyị nwere ike ile anya na ihe ndị ọzọ metụtara ya maka echiche siri ike. Deng et al. (2013) kọrọ na site n'iji ụdị ọdịiche dị iche iche na-ese okwu, ha nwere ike belata ngbanwe nke atụmatụ ha site na ihe dịka 50% na nyocha atọ dị iche iche n'ịntanetị; ihe yiri nke a bụ Xie and Aurisset (2016) . Mbelata nke 50% a na-egosi na ndị na-eme nchọpụta nke Emotional Contagion nwere ike ịbụ na ha nwere ike ịkpụcha ihe nlele ha ọkara ma ọ bụrụ na ha jiri ụzọ nyocha dịtụ iche. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ya na ngbanwe dị nro nyocha ahụ, mmadụ 350,000 nwere ike ịbụ ndị e cheere itinye aka na nnwale ahụ.
N'oge a, ị nwere ike ịnọ na-eche ihe mere ndị nchọpụta ji eche ma ọ bụrụ na mmadụ 350,000 nọ na Contagion mmetụta uche n'enweghị isi. E nwere atụmatụ abụọ nke Emotional Contagion nke na-eche nchegbu na oke oke kwesịrị ekwesị, na njirimara ndị a na-ejikọta atụmatụ ndị a: (1) enweghị mgbagwoju anya banyere ma nnwale ahụ ga-emerụ ahụ ma ọ dịkarịa ala ụfọdụ ndị na-etinye òkè na (2) òkè abụghị afọ ofufo. O yiri ihe ezi uche dị na ya iji gbalịsie ike ịnwe nyocha ndị nwere njirimara ndị a dị ka obere dị ka o kwere mee.
Iji mara nke ọma, ọchịchọ ị belata nzere nke nnwale gị apụtaghị na ị gaghị agba ọsọ nnukwu ego efu. Ọ pụtara nanị na ịnwepụta gị ekwesịghị ịbụ ibu karịa ka ịchọrọ iji mezuo nzube sayensị gị. Otu ụzọ dị mkpa iji jide n'aka na nnwale dị n'ụzọ kwesịrị ekwesị bụ ịhazi njikwa ike (Cohen 1988) . N'ime oge analog, ndị na-eme nchọpụta n'ozuzu ha nyochaa ike iji jide n'aka na ọmụmụ ihe ha adịghị oke (ntụgharị, na-akwadoghị). Ma, ugbua, ndi oru nyocha kwesiri ime nyocha ike iji jide n'aka na omumu ha adighi oke (ya bu, ike karia).
Na njedebe, nchịkọta nke atọ, dozie, na belata-nye ụkpụrụ ndị nwere ike inyere ndị nchọpụta aka ịzụlite ụkpụrụ dị iche iche n'ime atụmatụ ha. N'ezie, mgbanwe nke ọ bụla n'ime Emotional Contagion na-eme ka ndị ahịa kwụsị. Dịka ọmụmaatụ, ihe akaebe sitere na nyocha anụ ahụ anaghị adị ọcha dị ka nke ahụ site na ịnwapụta nke ọma, na ịmekwu ọdịnaya nwere ike ịbụ ihe siri ike iji mee ihe karịa igbochi ọdịnaya. Ya mere, ebumnuche nke ịkọ mgbanwe ndị a abụghị ihe abụọ nke mkpebi ndị nchọpụta ndị ọzọ. Kama nke ahụ, ọ bụ iji kọwaa otú atọ R nwere ike isi jiri ya mee ihe n'ọnọdụ dị mma. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị na-eme nchọpụta, ị ga-enwe ike ịchọta ihe gbasara iwu. Mgbe e mesịrị, na isi nke 6, m ga-enye ụfọdụ ụkpụrụ na ụkpụrụ omume ndị nwere ike inyere ndị nchọpụta aka ịghọta ma kwurịta ihe ndị a.